Onye na-emepụta sweta, Cardigan Supplier, Knitwear Factory - Haiermei
Gịnị mere anyị ji họrọ US?
Tọrọ ntọala na 1999
Mmepụta Kwa Afọ nke Nde 3
Suzhou Industrial Park Haiermei-akpa na uwe Co., Ltd. bụ ọkachamara akwa na uwe mmepụta na mbupụ enterprises.It hụrụ na 1999; emi odude ke Suzhou Industrial Park.And nwere a mara mma gburugburu ebe obibi na-adaba adaba njem.
Ugbu a R & D na imewe ngalaba e guzobere na Suzhou, China.And Haiermei Production Base: Suqian Xiangtailong Textile Technology Co., Ltd. na-ekpuchi mpaghara nke 20,000 square mita.Our enterprise nwere ike mbara ike: anyị nwere ihe karịrị 300 ndị ọrụ, n'etiti ha, nwere njikwa oru 40.
Ladies Fashion Long-uwe Aka OEM Flower Knitted ...
Ladies Ejiji oghere Out Mkpịsị Lapel Pullover C ...
N'ogbe Men jipa uwe Fancy Cardigan Kni ...
Fashion Custom Knit N'ogbe Jacquard Pullover ...
Emeputa OEM Solid Agba Mens High olu akwa W ...
Men Turtleneck Solid Agba ebughibu Pullover Knitti ...
Omenala ọkara-High Guzosie olu akwa patches Cashmere ...
Omenala V Olu Sweaters Men Intarsia Cashmere Kn ...
OEM Factory N'ogbe Fashion kpara Cotton Pu ...
Omenala Pullovers ọgịrịga ikpa Ọkara High olu akwa Ladi ...
Ndụmọdụ maka ịwụsa ajị anụ na ajị ajị ajị anụ
1. Agaghị eji ajị ajị ajị ajị agbapụ ntutu: Ghichaa tablespoon stachi na ọkara bezin mmiri oyi, gbanye ajị anụ woolen wee wepụ ya n’aghọghị ya, gbanye ya ma debe ya na mmiri na obere ịsa uzuzu, gbanye ya maka oge 5. net. 2. A mkpa oyi akwa nke ọkwa w ...
Ndụmọdụ iji belata ọkụ eletrik na-arụ ọrụ na ọsụsọ
Mgbe ị na-eyiri uwe oyi na uwe ya, imetụ ndị ọzọ aka, ma ọ bụ metụ ihe ọla aka na mberede, a na-ewepụta ya na mberede. Nwere ike ịhụ ọkụ ọkụ eletrik na ikuku. Ọ bụghị naanị aka gị ga-emerụ ahụ, kamakwa ọkụ eletrik na-agakarị ...
Ihe dị iche na sweta na sweta
Echiche na sweta bụ ụdị akwa mkpuchi. Knitwear bụ echiche sara mbara. Enwere ike ikewa uwe Knit uwe n'ime owu na owu na ajị anụ, na ajị ajị nke nke ajị anụ ajị anụ. Ihe mkpuchi a na-arụkarị nke anyị na-ezo aka n'ozuzu na-ezo aka na akwa ndị eji akwa kn ...
-Flat stitch A makwaara dị ka weft-larịị nzukọ, otu-kwadoro nzukọ. Knitting agịga ndokwa: akpa Jersey na agịga zuru ezu na otu agịga bed. The akwa nwere nnukwu transverse extensibility na curling Njirimara, na ọ dị mfe na-ada iche mgbe ...